Qeybtii Lix Iyo Tobnaad “16” Waxaan Ahaa Gabar Islii Shaax Ku Kariso Lakin Nin Baa Qisadaan Xun Qalbigeyga Ku Reebay “Qiso Xiiso Badan”… | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: August 15, 2014, 3:00 pm
Billoowga Qeybta Lix Iyo Tobnaad.
Muqtaar xaaskiisii hore markey aragtay xaalada uu muqtaar ku jiro intey Iscelin kari waaysay ayey dhinacyadeeda eegtay mise waxey aragtay dhalo yar oo lagu keydinayay kalluun ama malaay oo aay biyo ku jiraan malaaygaasna iskaga dhex socsocdo kuwaasoo loogu talo galay in isbitaalka lagu qurxiyo.
Muqtaar xaaskiisa intey dhaladii soo qaaday ayey muqtaar oo aan ka fileyn madaxa ugu dhufatay dhaladii biyaha iyo kaluunkii oo wada socdo, muqtaar sariirta u dhinaca ugu fadhiyay ayuu ka dhacay, aniga wax awood ah ma aan laheyn oo aan muqtaar ku difaaco balse hada aniga ayeyba iisoo socotaa markii aay xaqiiqsatay in muqtaar aay la heshay.
Aniga qeylo ayaan miciin biday maadaama awood kale iga muuqan durbadiiba qolka waxaa soo galay kalkaaliyaal maqlaya dhawaqa dhalada iyo qeyladeyda oo hal mar is wada qabsaday, muqtaar xaaskiisa oo igu soo fool leh ayey iga qaqabteen ayadana waxey ku qeylineysay ha iga celina waa hadaan labadoodaba naf ku dhaafo.
Markii la celin waayay oo maantoo dhan aay tahay qof fafakad ah ayaa dhaqtarkii yimid wuxuu amray in muqtaar la qaado oo la seexiyo sariiraha bukaanka kalkaaliyaashana aay sii dhayaan, dhaqtarkii ayaa suaalay muqtaar xaaskiisa sababta aay u dooneyso iney disho labadaan ruux, muqtaar xaaskiisa ayaa ku celisay adigu miyaad garaneysaaa, dhaqtarkii ayaa yiri haa oo waa nin iyo naagtiisa oo isjeceyl xaaskiisa oo uur uleh ayuuna halkaan maalmahaan la joogay ee adigu yaad tahay.
Intaas markii aay dhaqtarka afkiisa ka maqashay ayey is celin kari waaysay durbadiiba dhaqtarkii ayey wejiga ka xaqatay cijiyo dheedheer ku dhigtay candhuufna u raacisay dhaqtarkii ayaa durbadiiba amra in waardiyaasha aay u xiraan gabadhaan kadibna aay u wacaan booliska si loogu wareejiyo.
Waardiyaashii ayaa qaqabtay muqtaar xaaskiisii kuna xabisay qol kamid ah qolka aay ayagu daganaayeen illaa uu booliskii ka imaanayay, kadib markuu booliskii imaaday ayaa xaaskii muqtaar booliska lagu wareejiyay xabsiga ayaana loo taxaabay.
Dhaqtarkii markuu is daweeyay asaga naftiisa kadib ayuu wuxuu bilaabay inuu daaweeyo muqtaar oo madaxa dhaawacyo culus kasoo gaareen, muqtaar awood uu ku hadlo yuu dhaqtarkii u diiday waxaa lagu yiri dhaawac culus ayaa madaxa kaasoo gaaray looma baahno inaad hadasho xattaa in yar madaxa ayaa loo duubay waxaa lagu yiri 3 beri inta ayaad jiifeysaa oo dhaawacaada ayaa la baxnaaniyaaa.
Muqtaar maskiinka ma hadli karo oo hadalkii waa loo diiday wuxuu ka walwalsan yahay xaalada xaaskiisa, gabadhi masaakiinta aheyd ee uu caawinayay iyo sodohdiisa oo gurigii weynaa keligeed looga soo tagay qof u tagi kartaa oo caawin kartaana aaysan jirin, talo ayaa ka cakirantay qof walboo qol gooni ah ayuu ku jiraa, qof waa xabsi, labo qofna waxey ku kala jiraan qolalka isbitaalka, xaaskana xabsi ayaa la seexiyay, halka hooyadii iyo ilmihii aay isugu dul rafaadsan yihiin.
Aniga sariirtii muqtaar xaaskiisa igu dili gaartay ayaan jiifaa waxaan iska raadiyayay awood aan ku dhaqaaqo oo aan ugu tago muqtaar qolka uu jiifo, waxaan ka dhuuntay kalkaaliyaasha hadii aay I arkaan maadaama aay I celinayaan oo aaysan ii ogoleyn inaan dhaqdhaqaaqo.
Anoo dhuumaaleysanayo oo jilbaha ku socdo ayaan gaaray qolkii uu ku jiray muqtaar, muqtaar markuu I arkay wuu iga naxay xaalada aan kusuganahay anoo awoodin inaan socdo oo aan ugu imid jilbaheyga.
Faraha ayuu iiga nuunuuxiyay taasoo aan fahmi waayay macnaha uu ka waday, waxaan garguurtaba waxaa nasiib u yeeshay inaan agtiisa gaaro, kadibna waxaan si hadal meel dheer ah ku iri………………..
Qiso Gaaban Oo Cajiib Ah Qofkii ILLAAH Ka Xishoodo ALLAAH Wuxuu Abaal MArin Ugu Dhigaa Sidaan Oo Kale..